The Kid Detective (2020) | MM Movie Store
အလေို့ချေါတဲ့ ကောငျလေးက အသကျ ၁၂ အရှယျကနေ စပွီး ကလေးစုံထောကျအဖွဈ အလုပျစလုပျခဲ့တယျ။ထကျမွတျတဲ့ကလေးတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ အမှုတှကေို ဖျောပေးနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျ သူ့မွို့လေးမှာသူဟာ အရမျးကို နာမညျကွီးလာခဲ့တယျ….
မွို့လယျခေါငျမှာ ရုံးခနျးလေး ဖှငျ့နိုငျတဲ့အထိ သူက အောငျမွငျခဲ့တယျ။ အမှုအပျတဲ့သူတှမြေားလာသလိုသူကိုယျတိုငျလညျးအတှအေ့ကွုံတှမြေားလာတဲ့အတှကျ တျောရုံအမှုဆို အခြိနျတိုအတှငျးဖွရှေငျးနိုငျလရှေိ့တယျ….နောကျပိုငျး သူ့ရုံးခနျးလေးအတှကျ အတှငျးရေးမှူးမလေးအဖွဈ သူ့သူငယျခငျြး ဂရစေီကိုတောငျ အလုပျခနျ့ထားပါသေးတယျ…
အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ သူ့အောငျမွငျမှုတှနေဲ့ သူ့ဘဝကို ဟိုးအောကျဆုံးဆှဲခသြှားစတေဲ့ဖွဈရပျတဈခုရောကျလာခဲ့တယျ..အဲ့ဒါက သူ့ သူငယျခငျြးမလေး ဂရစေီ ပွနျပေးဆှဲခံရပွီး သူဘယျလောကျပဲကွိုးစား ကွိုးစားပွနျမတှတေ့ော့တဲ့အဖွဈကွောငျ့ စိတျဓာတျတှအေကွီးအကယျြကခြဲ့တဲ့အပွငျ သူ့ကိုလညျးအားလုံးက ဖယျကဉျြလာကွတယျ…
နောကျဆုံးမှာတော့ သူ့နာမညျကိုပွနျအဖတျဆယျ ခကျခဲလှနျးတဲ့အမှုကွီးတဈခုကိုလိုကျဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ…သူအောငျမွငျမလားဆိုတာကိုတော့…….စိတျဝငျစားစရာမှုခငျစုံထောကျကားတှသေဘောကတြဲ့သူတှအေတှကျကွညျ့သငျ့ပါကွောငျး…
အေ့လို့ခေါ်တဲ့ ကောင်လေးက အသက် ၁၂ အရွယ်ကနေ စပြီး ကလေးစုံထောက်အဖြစ် အလုပ်စလုပ်ခဲ့တယ်။ထက်မြတ်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အမှုတွေကို ဖော်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် သူ့မြို့လေးမှာသူဟာ အရမ်းကို နာမည်ကြီးလာခဲ့တယ်….
မြို့လယ်ခေါင်မှာ ရုံးခန်းလေး ဖွင့်နိုင်တဲ့အထိ သူက အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ အမှုအပ်တဲ့သူတွေများလာသလိုသူကိုယ်တိုင်လည်းအတွေ့အကြုံတွေများလာတဲ့အတွက် တော်ရုံအမှုဆို အချိန်တိုအတွင်းဖြေရှင်းနိုင်လေ့ရှိတယ်….နောက်ပိုင်း သူ့ရုံးခန်းလေးအတွက် အတွင်းရေးမှူးမလေးအဖြစ် သူ့သူငယ်ချင်း ဂရေစီကိုတောင် အလုပ်ခန့်ထားပါသေးတယ်…
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ သူ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ သူ့ဘဝကို ဟိုးအောက်ဆုံးဆွဲချသွားစေတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုရောက်လာခဲ့တယ်..အဲ့ဒါက သူ့ သူငယ်ချင်းမလေး ဂရေစီ ပြန်ပေးဆွဲခံရပြီး သူဘယ်လောက်ပဲကြိုးစား ကြိုးစားပြန်မတွေ့တော့တဲ့အဖြစ်ကြောင့် စိတ်ဓာတ်တွေအကြီးအကျယ်ကျခဲ့တဲ့အပြင် သူ့ကိုလည်းအားလုံးက ဖယ်ကျဉ်လာကြတယ်…
နောက်ဆုံးမှာတော့ သူ့နာမည်ကိုပြန်အဖတ်ဆယ် ခက်ခဲလွန်းတဲ့အမှုကြီးတစ်ခုကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…သူအောင်မြင်မလားဆိုတာကိုတော့…….စိတ်ဝင်စားစရာမှုခင်စုံထောက်ကားတွေသဘောကျတဲ့သူတွေအတွက်ကြည့်သင့်ပါကြောင်း…